Kutheni imibhobho yevinyl- IVinylpipe
Kutheni imibhobho yeVinyl?
Isizathu esinye sokuba ukhethe iipayipi zeVinyl kwiimfuno zakho zolawulo lwamanzi: ukuthembela, ukuthembeka kunye nokuthembeka. Ukuthenjwa kumazwe angama-44 angaphezulu kwe-100 + abasasazi kwihlabathi liphela, kwaye kwaziwa ngokuthembeka kwizizukulwana ezi-4 zokugqibela, thina eVinyl, sibonelela ngemibhobho ngesiqinisekiso esipheleleyo kunye nesiqinisekiso soluhlu lwemveliso yethu.
Kufuneka ufumane imibhobho esemgangathweni ye-uPVC ngexabiso elifanelekileyo, uyihambise ngexesha elifanelekileyo; lonke ixesha uyabafuna. Kuphela kungokuzithemba apho unokuqhuba khona ishishini lakho. Kwaye iVinyl liqabane eliza kuqinisekisa umgangatho, ukuhanjiswa ngexesha, ngokungaguquguqukiyo.
Kutheni le nto iVinyl ithembekile ngumzi mveliso wamanzi kwihlabathi liphela?
Ukuqonda abathengi bethu kunye nokubamamela
Olu lolona phawu lubalulekileyo lubalulekileyo kwiVinyl njengeqela. Simamela iimfuno zabathengi, iimfuno, izicelo kunye neengcebiso. Oku kusenze saba ngumthengisi okhethwayo kubasasazi abali-100 + kumazwe angama-44. Nokuba kuyimfuno yesixhobo sokuqhuba okanye sokuhambisa okanye kwanobuchwephesha bokufuna iithenda, sizama ukuzisa okuhle kuthi.
Imvelaphi yeVinyl iya kude kudala ngo-1941, kwaye yasekwa njengeshishini lokuqhuba nosapho. Ngo-1971, iVinyl yamisela umzi-mveliso wokuqala wePVC waseNyakatho India. Ngoku iqhutywa sisizukulwana sesithathu sosapho, iVinyl ibonakala njengeshishini eliqhutywa kakuhle elinamashumi eminyaka yobuchwephesha emva kwayo.
IVinyl iyaqhayisa ngokuzibophelela kunye nabasebenzi abanobuchule, egxile ekwakheni iimveliso zobuvulindlela. Ngenxa yobungcali kwinkampani, iVinyl ikwazile ukuyila imibhobho ye-PVC kunye ne-uPVC enikezela ilahleko esezantsi yomlo. IVinyl ikwaphuhlise amandla elinde ilungelo lomenzi elisetyenziswa kwimibhobho yekholamu.
Ukwenziwa kobugcisa bobugcisa
Umzi mveliso weVinyl eMantla eIndiya usasazeka ngaphezulu kwe-65,000 sq.m yendawo, exhotyiswe ngemigca yokuhambisa umbhobho waseJamani, nangaphezulu koomatshini beCCN abalishumi elinambini. Bacubungula i-12,000 MT ye-UPVC minyaka le kwikholamu, istasing, i-SWR kunye nemibhobho yoxinzelelo. Umzi-mveliso omtsha uza kwidolophu ekumazibuko eKandla, unika iVinyl ithuba lokuhanjiswa ngokukhawuleza kwehlabathi.
IVinyl izinikele ekuboneleleni abathengi bayo ngomgangatho ophezulu kunye neemveliso ezingenasiphene ngenkqubo yophuculo oluqhubekayo. Umgangatho uhamba phambili kubungakanani, sisaci senkampani. IVinyl ikwaxhasa abathengi bayo ngenkonzo yezobuchwephesha ekhokelayo, kunye nenkxaso yezobugcisa kunye noqeqesho.
Umzi mveliso weVinyl ngumzi-mveliso oqinisekisiweyo we-ISO 9001 kwaye uvelisa nemibhobho ngokwemigangatho ye-BIS kunye neRoHS. Ukubonelela ngamanye amazwe, iVinyl ilandela imigangatho yelizwe elithile.
Imibhobho yeVinyl yenziwa ngezinto ze-PVC ezikumgangatho ophezulu kunye ne-uPVC edityaniswe endlwini. Ukuguquguquka okuphezulu kwemibhobho yeVinyl bubungqina bokuba zilungile kangakanani, njengoko kungekho kungcola. Iinkqubo zeVinyl ziqinisekisa ukuba kufakwa nje icandelo elifanelekileyo lezongezelelo ukwenza imibhobho.
Imibhobho yeVinyl ivavanywa rhoqo kumgangatho wokujonga izinto kunye nobungakanani bomzimba. Baye bavavanywa amandla abo okuqina, ukomelela okungagungqiyo kunye noxinzelelo olunqabileyo.
Ukunikezelwa kwenethiwekhi ebanzi
IVinyl inenethiwekhi yomhlaba yabasasazi abathunyelwa kubo rhoqo ngokwee-odolo zabo. Ngaphakathi e-India, i-Vinyl inamasebe aliqela kunye neendawo zokugcina ezigcina unikezelo kwilizwe liphela.